5 Yakanakisisa iMovie Dzimwe nzira dzeWindows 10 - Softwares
5 Yakanakisisa iMovie Dzimwe nzira dzeWindows 10
Mushure mekugadzirwa kwekamera, tech yakafambira mberi zvakanyanya munyika yemavhidhiyo. Mavhidhiyo ivaraidzo huru kune vanhu pasirese. Apple yagara ichiuya neakanakisa software mune avo vese madhizaini. iMovie ndeimwe yeakanakisa software yekugadzirisa vhidhiyo, asi iMovie ye windows haina kuwanikwa.
Unonakidzwa nekukuyeuchidza nezvenzendo dzako here? Saka, wadii kuvatora vese?
Kuburikidza neMovie, unogona kugadzirisa ako mavhidhiyo munzira dzakanakisa. Pasi rese iyi software irikushandiswa nevlogger vepasirese uye venyika. Asi iyo iyo yekumisa vazhinji kubva mukushandiswa kwayo ichokwadi. Izvo zvinogumira kune vashandisi veApple Mac chete, asi haufanire kugumbuka sezvatakakuunza kuno kuti uwane mhinduro dzakanakisa.
Nyanzvi vhidhiyo edhita uye vatori vemifananidzo vanotsvaga dzimwe nzira dzinogona kuvapa iwo akanakisa mhando uye maficha mushure meMovie.Ichi chinyorwa chingave chiri kuratidza akanakisa mamwe maimmo eMovie pamawindo ekugadzirisa vhidhiyo.
Yakanakisa iMovie Dzimwe nzira dze windows 10:
Movavi ndeimwe yeakanakisa vhidhiyo yekugadzirisa software uye akanakisa mamwe maMovie e windows.
Aya anotevera ndiwo makuru maficha eMovavi ayo akazviita kuti zvive mune runyorwa rweakanakisa mamwe maMovie emahwindo.
Luts:Ichi chimiro chinopa vashandisi kudzokorora iwo mamiriro mumavhidhiyo ako ane marangi zvirongwa. Unogona kusarudza chero chirongwa chemuvara kubva kune chero bhaisikopo raungade uye riise pavhidhiyo yako.
Kubvumirana:Iyi software inokubatsira kuti uwiriranise zvakarekodhwa nemavhidhiyo zvinyorwa zvawakanyora zvakasiyana.
Logo chishandiso: Chishandiso cheiyo logo chinokubatsira iwe kuti uwedzere chero logo kuvhidhiyo yako. Izvo zvinoita kuti iwe uwedzere kufarira kugadzirisa.
Auto-kugadzirisa:Iyo software inogadziridza ese matsva maficha otomatiki. Saka, dzimwe nguva vanokuita kuti ufare nekushamisika.
Zvimwe zvinhu zvakawanda zvakaita sekusefa, kutora mapikicha, resolution yepamusoro, kuswededza mukati, uye kufamba kunoita kuti unzwe kugutsikana kunyangwe usina iMovie.Movavi inoita kunge ndiyo yakanakisa nzira yeMovie ye windows, sezvo iine zvakawanda zvinonakidza uye zvinogutsa maficha. Inopa mhinduro dzese dzinokwanisika kuzadzikisa zvido zvako zvekugadzirisa vhidhiyo.
Iine shanduro zhinji.
Kubvumirana kweyekuteerera uye vhidhiyo yekurekodha.
Zvepamhepo kurodha pasi vhidhiyo hazvigoneke.
Iyo ndeimwe yeakanakisa evhidhiyo edhita anoshanda senge yakanakisa imwe iMovie ye windows, desktops, uye PC.Iyo inochinjika maererano nemusika wayo wevatengi. Anenge munhu wese anogona kushandisa iyi software kugadzirisa mavhidhiyo, sezvo iri nyore kushandisa. Kana usiri nyanzvi vhidhiyo mupepeti asi uine chinangwa chekuva mumwe, Filmora ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo kwauri.
Izvi zvinotevera zvimwe zvezvinhu zvakakosha zveiyi imwe nzira yeMovie ye windows.
Iyo ine yakafara fomati rutsigiro.
Iwo ekugadzirisa mabasa ane simba kwazvo.
Iyo ine inokatyamadza yekuona mhedzisiro.
Iyo software ine akawanda maficha anogona kubatsira mukugadzirisa vhidhiyo uye kuita kuti riite senge rinoshamisa. Iyo ine dzakasiyana siyana mhedzisiro uye sarudzo yekugutsa zvaunoda.Unogona kubvarura kana kuisa mapikicha ako, mavhidhiyo nekukurumidza. Mumwe anogona kuwedzera backtrack nekusarudza chero ruzha rwaunoda. Inzwi rekurekodha rinogona kuwedzerwa kune vhidhiyo senge backtrack. Iyo ine yakasarudzika maficha senge mosaic, kumeso kure uye kurereka-kusuduruka, nezvimwe.
Iyo ine sarudzo yekuisa vhidhiyo yako pane akasiyana masocial media mapuratifomu zvakananga, kana iwe unogona kuichengeta pane yako kifaa.Inoenderana neese mushandisi uye inogona kutorwa senge yakanakisa sarudzo yeMovie ye windows.
Inoenderana kune ese windows kusvika windows 10
3. Pfupiso Vhidhiyo Edhiyo
Pfupiso vhidhiyo mupepeti ndechimwe chakakurumbira imwe software yeMovie ye windows. Iyi software yakavhurwa sosi, uye inowirirana neMac, Linux, uye windows.
Zvimwe zvezvinhu zvacho zvakafanana neFilora, asi zvakadaro, zvakasiyana nenzira dzakawanda.Zvinotevera ndezvimwe zvezvakakurumbira maficha.
Iyo ine yakafara fomati rutsigiro senge Filmora.
Iyo interface yakanyatsogadzirwa.
Kutungamira kurodha kumasocial media mapuratifomu.
Iyo software inopa yakawanda maficha ayo anogona kukubatsira iwe mune inonakidza vhidhiyo yekugadzirisa.Iyo ine zvimwe zvinhu zvakafanana neFilora, senge yakafara fomati rutsigiro, asi inouya neinoshamisira maficha eakasarudzika mafirita. Kushandisa iyi software kungave chiitiko chinonakidza kwauri.
Zvakaoma kutumira kunze kune zvimwe zvishandiso.
Hapana kuongororwa kwemafirita usati washandiswa.
Itchishandiso chemahara chekugadzirisa vhidhiyo chinobatsira windows nevashandisi veMac kugadzirisa avo emhando yepamusoro mavhidhiyo.Chishandiso chemhando yepamusoro, uye chine zvakawanda zvinoita kuti chive chakakurumbira uye chakasarudzika pane mamwe software seyakanakisa iMovie imwe windows.
Izvi zvinotevera zvimwe zvezvakakurumbira zvezvinhu zvekutanga zveadobe.Iyo otomatiki ine hungwaru yekugadzirisa inokuzivisa iwe neshanduko inoshamisa iyo yako vhidhiyo inowana mushure mekuiisa kune iyi fomati.
Izvo zvisikwa zve auto zvakagadzirirwa zvakanyanya kuwedzera mafirita uye mhedzisiro kumifananidzo yako otomatiki. Kushandisa iyi software kunogona kukubatsira kuti usvibise kana kujekesa chero nzvimbo chaiyo mumavhidhiyo ako kuti aite kuti aenderane nezvaunoda uye zvaunoda.Iyo ine yakaderedzwa ruzha mhedzisiro, iyo inovandudza iyo grainy mavhidhiyo awakatema mune yakaderera mwenje.
Adobe ndeimwe yeanonyanya kufarirwa software yekugadzirisa vhidhiyo. Iyo ine akawanda epamberi maficha ayo anozviita mune rondedzero yepamusoro shanu yakanakisa imwe iMovie ye windows.
Zvisikwa zvaro otomatiki, kurongedza zvine hungwaru, uye kusarudzwa kwenzvimbo kwakasarudzika kwemhedzisiro inoita kuti igadziriswe kushandisa. Iyo ine zvimwe zvakawanda maficha, sekugadziriswa kwechiso chinzvimbo, remixing mimhanzi track, uye clearance yemhute inoita kuti ive inokurudzirwa.
Otomatiki kutandara uye nehungwaru ekugadzirisa maficha
5. Avidemux Vhidhiyo Mupepeti
Avidemux vhidhiyo mupepeti ndicho chakakosha chishandiso chekugadzirisa icho chashandiswa zvakanyanya senzira yeIMovie ye windows.Inoenderana nema windows, Mac, Linux, uye mamwe mapuratifomu. Izvo zvakare zviri nyore kushandisa, uye kazhinji, zvinoshandiswa kugadzirisa mavhidhiyo akareruka.
Zvinotevera ndizvo zvakakurumbira maficha eAvidemux:
Iyo ine akasiyana mafirita.
Iyo inokwanisa kuratidza mafaira.
Iyo inogona kugadzirisa zvinyorwa.
Iyo ine inokwanisa kugona kutema mavhidhiyo uye kuvaita madiki.
Iwe unofanirwa kuenda kune Avidemux vhidhiyo mupepeti kana usiri nyanzvi vhidhiyo mupepeti uye urikutsvaga yakapusa vhidhiyo yekugadzirisa software.Iyo ine iyo yakatemwa, kutetepa, kusefa, uye kuisa zvimwe zvinonzwika izvo vhidhiyo iri nyore ingangoda.
Kugadzirwa kwevhidhiyo kunokurumidza.
Hazvikodzeri kune yakaoma vhidhiyo yekugadzirisa
Kunyangwe iMovie iri yakanakisa vhidhiyo-yekugadzirisa software, haiwanikwe kune mamwe madhivha asiri Mac, saka vhidhiyo-editors vanofanirwa kuve neyakanakisa sarudzo yeMovie ye windows.Chinyorwa chiri pamusoro apa chakaratidza ruzivo pamusoro pedzakanakisa dzimwe nzira dzeMovie ye windows. Yese software yakataurwa pamusoro apa inoenderana nema windows.
Izvo zviri nyore kuwana uye nyore kushandisa. Unogona kuve nekugadzirisa kwakanaka uye kuenzaniswa kwemavhidhiyo ako, mapikicha, uye odhiyo yekurekodha pamwe chete muchiratidzo chinoshamisa.Iyi software yaizobatsira kutarisa ako anotevera Youtube vlogs kana Instagram mavhidhiyo, kana Facebook vhidhiyo kurodha zvakanyanya kushamisa, kurova, uye zvine simba.
Yakanakisa CamScanner Dzimwe nzira
Torrentz2.eu Domain Yakamiswa - Zvakanakisa Dzimwe nzira (2020)
youtube ku mp 3 inoshandura
wach tv inoratidza pamhepo mahara
download chero youtube vhidhiyo ku mp3
unogona here kushandisa kik pane pc
kuchengetedza youtube mavhidhiyo se mp3